CUDURKA QAAXADA - DHIRTA JIILAALKA LAGA BILAABO A ILAA Z, SAWIRO IYO VIDEO - SOOSAARKA DALAGGA
Sida loo abaabulo jiilaalka habboon ee digriiga begonia?
Kaydinta qaboobaha ee digriiga waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ka soo baxaya beerashada Tuberous Begonia, taas oo caan ku ah ubaxyada gudaha iyo beerta sii kordhaya. Si aysan u dhiman xilliga nasashada oo aaney jiran, waa inaad raacdaa xeerarka xabsiga inta lagu jiro xiliga jiilaalka.
Siraha diyaarinta jiilaalka
Kaydinta saxda ah ee dhashay begonia ee jiilaalka - shardi. Haddii aan la ixtiraamo, digriiga waxay ku beeri doonaan qadar yar oo burooyinkoodii, ubaxuna yar yahay.
Marka hore, waa inaad u hoggaansameysid shuruudaha ka soo saarista ciidda. Haddii uu soo daahay, sugaayo barafka ugu horeeya, waxaa laga yaabaa inuu xanuunsado. Digriiga ee ubax this uma dulqaadan xitaa qashin-gaaban waqti-gaaban. Laakiin kama hor dhigi kartid. Sida ugu dhakhsaha badan caleenta wuxuu bilaabmaa inuu qalalo, ubaxa wuxuu bilaabmaa mass tuber firfircoon iyo gaysashada ubax soo socda. Sidaa darteed, soo saaridda hore ee dhulka ayaa yarayn doona tirada ubaxyada xilliga daaqsinka.
Markuu ogaaday calaamadaha ugu horeeya ee isdabajoogga, joojinta waraabinta. Goobta furan, waxaa lagu talinayaa in lagu daboolo baadiyaha haddii ay dhacdo cimilada roobka.
Si fiican u fiirso Xaaladda qaybaha anteenada. Sida ugu dhakhsaha badan caleemaha oo dhan huruud noqdaan oo hoos u dhacaan - waa waqtigii waxqabadka. Ha isticmaalin fiiqan ballaaran waad dhaawici kartaa xididdadiisa jilicsan. Aan ku dhicin afkoda si tartiib ah ugu goynta jarjar beerta ama goosashada.
Ha jarin caleemaha dhulka - waad dhaawici kartaa guluubka. Dheecaan 2-3 cm dheer.
Kadib markaad qodid dhulka, nadiifi digriiga si fiican. Ku qalaji gudaha gudaha hawo diiran oo qallalan. Haddii ay jirto qoyaan badan qolka, rotting ayaa ka bilaabi kara digriiga. Inta lagu jiro muddada diyaarinta jiilaalka, digriiga bislaadaan, geedi socodka Waxay soconaysaa 15-20 maalmood.
Mararka qaarkood waxaa jira dhaxan dayrta lama filaan ah ee dayrta, iyo caleemaha geedka isla markiiba qaboojiso. Si qaldan u aaminsan in qaybta xididka ayaa sidoo kale la qaboojiyey. Inta badan inta lagu jiro muddooyinka gaaban, qaybta dhulka hoostiisa waa mid cakiran. Iska xoqo tijaabooyinka noocan oo kale ah iskuna day inaad iyaga ilaaliso.
Sidee loo dhigaa begonia-ba'an xilliga jiilaalka?
Heerkulka meesha jiilaalka waa in aanay ka badneyn 9-10 digrii. Tani waa xaalad lagama maarmaanka u ah calaamadeynta caleemaha ubaxa. Qoyaanku wakhti isku mid ah Waxa loo baahan yahay koror (70-80%). Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu hubin karo tan, iyada oo ku xidhan xaaladaha aad leedahay:
Qeybta hoose ama miiska
Habkani waa lagama maarmaan in la diyaariyo weelka ay ku jiraan digriiga. Tani waxay noqon kartaa sanduuq box ama sanduuq alwaax ah. Waxaa lagula talinayaa inaad ku shubto hoosta lakabka birta ah, peat ama balka.
Beeralayda ubaxa ah ee khibrad leh waxay si fiican u hadlaan iyagoo isticmaalaya qalabka casriga ah ee casriga ah ee loogu talagalay ujeedadaas.
Vermiculite - budada macdanta ayaa si ballaaran loo isticmaalaa beerta iyo beeraha gudaha. Ma jajabin mana ku jimicsado saameynta cimilada, sidaas darteed cayayaanka iyo bakteeriyadu uguma tarmaan. Dareeraha lagu dhejiyay waxaa ku jiri doona nidaam heer-kul ah oo leh hawo ku filan. Intaa waxaa dheer, ma ay qaadi doonaan cudurro iyo cayayaanka. Wixii kaydinta ee digriiga vermiculite qaso peat ama sida balka.
Digriiga waxaa lagu dhajiyay hal lakab oo ah barkinta diyaargarawga ah si aysan u taaban midba midka kale. Laga soo bilaabo korka dhirta la dhigay waxaa lagu daboolay lakabka isku dar ah ee kaydinta. Waa inay sidoo kale daboolaan masaafada u dhexaysa digriiga. Nuqul kasta waa in uu si macno leh ugu wareegsan yahay barkad isku dhafan.
Marka maqnaanshaha qolka hoose ama maqaasiinka, digriiga waxaa lagu keydin karaa qaboojiyaha. Dhammaadka, qalabka la qalajiyey waxaa la dhigayaa boorso, rusheeyey peat iyo vermiculite, ama isku dar ah ciid iyo vermiculite. Xirmada ayaa lagama maarmaan ah samee godadka loogu talagalay helitaanka hawada. Ka dibna xirmada waxaa lagu meeleeyaa qaboojiyaha.
Haddii qaboojiyahaagu leeyahay meel ku filan, waxaad ku dari kartaa digriiga sanduuqa hoose ee kaydinta khudradda, iyaga oo buuxinaya isku dhaf ah sida peirkii hore. Waxaa sidoo kale haboon in la isticmaalo weelasha cuntada. Waxay ku ridaan digriiga iyaga oo iyaga oo buuxiya sida sanduuqyada leh isku dar ah peat iyo vermiculite, ama sida balka iyo peat. Iska hubi in isku dhafka gaduudku uu gebi ahaan qalalan yahay, haddii kale gabadha ayaa barooran doonta ama saameyn doonta fungus.
Sidee loo dhigaa aaladda qaaxada ee jiilaalka dhalaalaya ee guri dabaq ah?
Hababka kaydka ee hore loo isticmaalo waxaa loogu talagalay kuwa waaweyn, kuwa waaweyn qaangaarka. Nuqulada yaryar way yar yahiin, iyo kaydka noocan oo kale ah. Waxaa lagula talinayaa in ay ku duubaan adigoo ku dhex jira dheryaha dhulka. Ku dar digriiga dhulka, waxaad ku dari kartaa qaybo dhowr ah oo dheri ah, oo geli qol qallalan, qabow. Mar ama laba jeer iyadoo ku xiran qoyaanka hawada ku hareereysan. Dhulka oo leh digriiga kaydsan wuxuu u baahan yahay in la qoyo.
Wintering Year Begonias
Kaydinta sanadaha ugu horeeya ee laga helay abuurka waa kala duwan, sababtoo ah xilliga nasashada waa qaraabo. Qaybta kor ku xusan waxay ka dhiman tahay xilliga dayrta, waana inay qaataan jiilaalka dheryaha.
Tan iyo caleemaha digriiga yaryar ayaa la ilaaliyaa, waxay u baahan yihiin iftiin. Laakiin heerkulka maaddada waa in aysan aheyn ka badan 15 darajo. Biyaha sannadka ugu horeeya si dhexdhexaad ah si aad uga fogaato cayayaanka.
Kuwa beeralayda ah ee aan caqliga lahayn waxay si qaldan u sameeyaan jootooyinka dhallinyarada ah sida ay ku sameeyaan kuwa waaweyn, kuwa caan ah. Laakiin tani aan la samayn karin, sababtoo ah sanadaha ugu horreeyay koray abuurka ayaa sii wadaan inay koraan xilliga qaboobaha. Haddii ay si qalad ah loo kaydiyo, way qallali doonaan.
Qaababka qolka nasashada ee qolka nasashada
Dhirta guri-koray ayaa sidoo kale u baahan tahay kaydinta jiilaalka. Farqiga ayaa ah in dhirta aan laga saarin ciidda.
Dayrta sida ugu dhakhsaha badan ee afkoda bilaabaan in ay engegaan oo qalalan, waxay si adag u yareeyaan inta jeer ee waraabinta iyo qadarka biyaha. Caleemaha, kuwaas oo ugu dambeyntii la qalajiyey, si taxadar leh u jar iyo nadiifinta dheriga meel mugdi, oo qabow. Xaaladaha noocan oo kale ah ayaa lagama maarmaan u ah dhirta si ay u nastaan ​​oo ay u helaan xooga ubaxyada xilli ciyaareedka soo socda.
Looma baahna in la dhibsado geedaha nasashada: u guuri meel ilaa meel, dib u soo celin. Fiiri xaalada nidaamka xididka. Waxa kaliya ee lagama maarmaan ah si loo hubiyo in dhulka uusan qalajin oo waxoogaa qoyan si joogto ah. Tani waxay si gaar ah muhiim u tahay inta lagu jiro hawlgalka kululaynta, tan iyo markii hawada qolalka ay qallalan tahay iyo digriiga qallajin karaa.
Dhirta si wanaagsan loo ilaaliyo on balkolooyinka la gashado ama albaabka balcony. Iyo sidoo kale begonia beerta, qolka waxaa lagu kaydin karaa qaybta hoose. Halkaas waxaad ku qortaa dherigii uu koray. Si aad u xakameyso helitaanka iftiinka fudud, dabool dharka leh wargeysyada ama maro adag.
Ha ku celin digriiga digriiga cusub ee ciidda cusub ka hor inta suunka - waxay bilaabi doonaan inay koraan, iyo tani waa mid aad u macquul ah.
Aad bay muhiim u tahay in dheriga geedka waxaa jiray iftiin badan iyo qorraxda tooska ah. Warshadu waxay ka soo degi doontaa waqti ka hor waxayna ku dhalan doontaa, ma haysato waqti si ay u jiifiso tiro ku filan oo ku hari ubax.
Muddada jiilaalka waxay ku dhamaanaysaa begonias bishii Maarso iyo Abriil. Ka saar digriiga meesha jiilaalka iyo iyaga ku diirran qolka. Waxaad sidoo kale ku dhalin kartaa peat qoyan ama ciid ka hor inta aadan ku beerin dhul furan. Intaas ka hor, iyaga hoos u dhig xal xalka uumiinka ah ee potassium.
Haddii ay jiraan burooyin badan oo ka mid ah tuber weyn. Ka hor intaan la dhicin, waa la gooyaa karaa. Gooyo meelaha geedkii ash, baaruud ama dhuxul.
Dhirta dhallinyaradu waxay leeyihiin sprouts dheer guga, waxay u baahan yihiin in la diiriyo oo xidid ku jira weelal gooni ah.
U hoggaansanaanta sharciyadan fudud ee kaydinta ayaa kaa caawin doona inaad ku raaxaysato xagaaga jilicsan iyo geedka ubax qurux badan.
Marka xigta waxaad arki kartaa sawir ka mid ah begonous begonia: